​Toe-javatra Manjavozavo Manodidina Ny Kabary Momba ny Zava-kanto Nataon’ny Filohan’i Shina, Xi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2015 7:51 GMT
Ny filoha Xi Jinping nanao kabary momba ny toeran'ny zava-kanto nandritra ny fikaonan-doha natrehan'ireo mpanakanto sy tompon'andraikitra amin'ny fampielezan-kevitra tamin'ny 2014. Sary navoaka tao amin'ny vaovaom-panjakana Xinhua.
Herintaona taorian'ny kabary nataon'ny filohan'i Shina, Xi Jinping amin'ny toeran'ny zavakanto nandritra ny fikaonan-doha tao Beijing natrehan'ireo mpanakanto malaza sy manampahefana misahana fampielezan-kevitra, namoaka ny lahatsoratra feno ny haino aman-jerim-panjakana Xinhua tamin'ny 14 Oktobra 2015.
Tsy nisy fanazavana nomena mikasika ny antony naharetan'ny fandikana ny kabarin'i Xi, izay niantso ireo mpanakanto mba hanompo vahoaka sy hifikitra amin'ny hevitra komonista. Tamin'izany fotoana izany, nanipika amin-tahotra ireo Shinoa avo ara-pianarana fa mitovy amin'ny kabarin'ny Filoha Mao Zedong momba ny asan'ny zavakanto eo amin'ny sehatra politika nandritra ny Forum momba ny Haisoratra sy ny Zavakanto tao Yan'an tamin'ny 1942, kabary izay nanamarika ny fiandohan'ny Hetsika Fanitsiana, hetsika ao anatin'ny Antoko Komonista Shinoa nampanao ny Shinoa avo ara-pianarana sy liberaly ho mpitondra feo ny antoko. Naharitra herintaona mahery ihany koa ny lahatsoratra feno misy ny kabarin'i Mao vao navoaka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny gazety mpitondra ny feon'ny antoko, Jiefang Daily.
Efa ela ireo mpitarika ao Shina no nahita ny zavakanto ho fitaovam-piadiana mahery vaika ao anatin'ny ampinga ara-potokevitry ny antoko sy nanome toromarika tokony arahina amin'ny famoronana sanganasa. Saingy hatramin'ny nisian'ny fanavaozana ara-toekarena tamin'ny taona 1980 nanokatra ny tsena Shinoa tamin'izao tontolo izao, dia niezaka ireo artista shinoa namaky ny fetra, ireo fetra voatonona etsy ambony.
Nandritra ny kabariny i Xi no nitsikera ny kolontsaina entin'ny tsena amin'ny sangany, manondro ny sanganasa sasany ho “fakon-kolontsaina”. Ity ambany ity ny sombin'ny dikateny tamin'ny kabary avy amin'ny bilaogin'ny New York Times iray Sinosphere :
Amin'ny asany sasany ireo artista sasany mamotsifotsy ny atao hoe mendri-kaja, manimba ny klasika. Mamadika ny tantara izy ireo ary mandoto ny vahoaka sy ireo fanorolahy. Ny sasany tsy milaza ny marina avy amin'ny diso, tsy manavaka ny tsara sy ny ratsy, mampiseho ny faharatsiana ho fahatsarana, manitatra ny lafiratsin'ny fiarahamonina. Jilajila ny sasany, manaram-po amin'ny kanto lany andro, ratsy tsiro ary namadika tsikelikely ny asan'izy ireo ho fidiram-bola, na amin'ny pilin'ny fahafinaretana ho any amin'ny fanaitairana ara-nofo. Ny sasany mamorona sy manoratra tsy misy fototra. Ratsy kalitao sy sarotra ny asan'izy ireo, namorona fakon-kolontsaina izy ireo.
“Trompetran'ny vanim-potoana ny Zavakanto”
Tafiditra amin'ny fiarovana ny maoraly Shinoa ao amin'ilay lazain'i Xi Jinping ho fihavaozam-pirenena ao amin'ny “Nofinofy Shinoa”. Fomba iray nadikana izany amin'ny tontolo tena izy ny fanaraha-maso hentitra napetraka amin'ny haino aman-jery sy ny fampidirana ireo “mpilatsaka an-tsitrapon'ny sivilizasiona” an-tapitrisany ao amin'ny Ligin'ny Tanora Komonista hiady amin'ny tolona ara-potokevitra antserasera.
Hatramin'ny namoahana ny lahatsoratra feno tamin'ny kabarin'i Xi, feno fanehoan-kevitra mandoka ny fijerin'i Xi ny tambajotra media sosialy sy ny sehatra lehibe.
Ohatra, naverina nalefa imbetsaka ny fanehoan-kevitr'i Xinhua:
Manakely lanja ny tenany ireo mpiasa ara-kolontsaina sasany amin'ny tsy firaharahiana ny vanim-potoana lehiben'ny fifohazam-pirenena ary mampilomano ny tenany ao amin'ny fahakelezan'ny vanim-potoanan'ny materialisma. Izay artista manana fahalalana kely momba ny fomba fitenin'ny vanim-potoana sy ny olona dia mety ho voasariky ny kabary sy handray anjara amin'ny fanorenana ara-panahy an'i Shina.
Nanatevin-daharana ny fiderana mazava ho azy ny Ligin'ny tanora Komonista sy ireo sampany :
Tokony tsy handiso fanantenana ny olona sy ny antson'ny vanim-potoana! Trompetran'ny vanim-potoana ny zavakanto, itoeran'ny fanahin'ny olona. Eo ambany fitarihan'ny fanahin'ny kabary, nanokatra dingana vaovao ny fampandrosoana ny zavakanto sy ny haisoratra. Tari-dalana lehibe ny fikirizana hampiditra ny olona ho ao amin'izany vihy izany, atsangany amin'izany ny fototry ny zavakanto sy ny haisoratra. Tsy maintsy mandray ny andraikitry ny vanim-potoana isika, izany no hafatra lehibe sy fanalahidin'ny fampandrosoana miroborobo ho an'ny zavakanto sy ny haisoratra.
Mpisera maro no niantso ny hafa mba “handray lesona” amin'ny resaka:
Mandinika indray ny kabarin'i Dadatoa Xi mikasika ny fifanakalozan-kevitra momba ny zavakanto sy ny haisoratra. Maranitra loatra ny ampahan'ny olana amin'ny zavakanto ankehitriny sy ny sehatra famoronana. Tsotra sy mazava. Tena mahafinaritra! Tsara. Tsy mitanila sady mazava, lalina sy mora takarina. Tsara indrindra.
Herintaona taty aoriana, navoaka tamin'ny 15 Oktobra ny lahatenin'i Dadatoa Xi mikasika ny fifanakalozan-kevitra momba ny zavakanto sy ny haisoratra . Amin'izany lahateny izany, nitanisa andinin-tsoratra maromaro i Xi ary nanonona ireo mpanakanto sy mpanoratra literatiora 112 avy ao Shina sy manerana izao tontolo izao. Tahaka ny mitantara ny antsasaky ny tantaran'ny sivilizasionan'olombelona. Tongava mianatra.
“Ankehitriny, soloin'ny lainga toerana ny zavatra hafa rehetra”
Tsy eritreretina lalina ny ilazan'ny mpandalina sasany ilay kabary, ankoatra ny famohazana ny fotokevitra Maoista, izay ezaka hanavao indray ny endrik'i Xi ho mpitarika shinoa manana kolontsaina vaovao, fa tsy mpitarika antoko komonista henjana mahazatra taloha.
Na dia tsy hita ao amin'ny aterineto aza ireo tsikera mivantana tamin'ny kabary, mbola mahita fampahatsiahivana ankolaka amin'ny fangejana feno herisetra nihatra tamin'ny fisainana avo ara-pianarana amin'ny tantaram-pirenena Shinoa ankehitriny ireo mpamaky manaraka tsara. Nanondro an'i Wang Shiwei, mpanoratra izay voaroaka tao amin'ny antoko komonista ary novonoina ho faty noho ny baikon'i Mao tamin'ny taona 1947 nandritra ny Hetsika Fanitsiana, ity fanehoan-kevitra ity:
Nataon'ny rafitra ara-politika ampihimamba ny kolontsaintsika, niafara tamin'ny tsy fisian'ny fahamaroana eo amin'ny asa zavakanto sy literatiora ny kabarin'i Mao tao Yan'an. Nilaza ny marina i Wang Shiwei ary novonoina. Ka lasa nironana ny filazana lainga. Ankehitriny, soloin'ny lainga toerana ny zavatra hafa rehetra.
Ankoatra ny Hetsika Fanitsiana, izay nitarika ny fahafatesan'ireo avo ara-pianarana tokony ho 10.000, nitarika ny fanenjehana ireo avo ara-pianarana an'hetsiny ihany koa ny hetsika anti-ankavananista tamin'ny taona 1950:
Namoaka ny kabarin'i Xi momba ny zavakanto ny haino aman-jerim-panjakana ary nandrisika “voninkazo an-jatony mamelana” milahatra miaraka amin'ny sosialisma – tsy mifanohitra ve izany? Tamin'ny 1956, nampiditra ny fitsipiky ny “fivelaran'ny voninkazo an-jatony sy sekolin'ny hevitra an-jatony hiteny” eo amin'ny sehatry ny zavakanto sy ny haisoratra ny antoko komonista Shinoa. Herintaona taty aoriana, navoaka ny hetsika anti-ankavananista ary ireo izay maneho hevitra manohitra ny fitsipiky ny “zato kambana” dia lazaina fa ankavananista. Niaiky ny gazety mpivoaka isan'andro People tamin'ny 1967 fa fandrika entina hisamborana mpanohitra fotsiny ny fitsipika “zato kambana”.
Raha ny marina, tafahoatra ny fanambaran'i Mao hampilahatra ny zavakanto amin'ny tanjon'ny antoko nandritra ny Revolisiona ara-Kolontsaina, amin'ireo Mpiambina Mena manafika sy mandrava ireo asa-tanana Shinoa nentim-paharazana sy ireo zavakanto vahiny. Nitarika any amin'ny fanomezan'ny antoko endrika zavakanto ara-politika sy fandripahana sy fampijaliana ireo mpanakanto fanta-daza sy olo-malaza ara-kolontsaina marobe ho manao ny tsy mety ny fomba fandraisana ny resaka tao Yan'an.
“Manahia, ary manàna ahiahy tanteraka…”
Hatramin'ny 2012, rehefa lasa filoham-panjakana i Xi, naneho ny fifohazan'ny fotokevitra Maoista ao Shina ireo fivoaran-draharaha isan-karazany. Tamin'ny taona 2012, mpanakanto 100 no nandika ny tenin'i Mao tamin'ny tanana ho fahatsiarovana ny fanamarihana ny faha-70 taonan'ny resaka tao Yan'an. Niteraka fielezan'ny tsikera ny fandraisana anjaran'ireo mpanoratra malaza maro, anisan'izany ilay nahazo ny Nobel literatiora Mo Yan satria lazaina fa misalotra ny famelezana ny fahalalahana ara-javakanto izy ireo.
Mpisera Twitter iray nilaza fa tsy misy fahasamihafana loatra amin'ny kabary tsara lahatra eo amin'ny fotokevitr'i Mao momba ny zavakanto “manompo antoko” sy ny fijerin'i Xi ny zavakanto “manompo vahoaka” :
Xi: “在大家共同努力下，我国文艺园地百花竞放” “Be worried, be very worried….
Xi: “Rehefa mifampitantana ny rehetra dia hamelana voninkazo an-jatony ny zavakanto sy ny haisoratra ato amin'ny firenentsika”. Manahia, manàna ahiahy tanteraka….